Ukwazi iBhayibhile—Kutheni Kubangela Umdla?
“IBhayibhile yincwadi esetyenziswa ezinkonzweni eyaziwa kakhulu. Ayibalulekanga kumaTshayina kuba akayiqhelanga.”—ULIN, ETSHAYINA.
“Kunzima nokwazi iincwadi ezingcwele zecawa endikuyo yamaHindu. Ndinokuyazi njani iBhayibhile Engcwele ke xa kunjalo?”—UAMIT, EINDIYA.
“Ndiyayihlonipha iBhayibhile kuba yincwadi ekudala ikho nendikhe ndeva ukuba yeyona ithengwa kakhulu. Kodwa andizange ndiyibone.”—UYUMIKO, EJAPAN.
Abantu abaninzi emhlabeni bayixabisa kakhulu iBhayibhile. Sekunjalo, kuncinane abakwaziyo ngayo, ukuba ikho kwaukubakho into abayaziyo. Le nto injalo kwizigidi zabantu baseAsia, nakwamanye amazwe apho iBhayibhile isasazeke khona.
Mhlawumbi usenokuzibuza, ‘Kutheni ndifanele ndibe nomdla eBhayibhileni?’ Ukwazi izinto ezithethwa yile ncwadi ingcwele kungakunceda:
Ukwazi ukumelana neengxaki zentsapho
Ukwazi ukumelana namaxhala
Ube nobuhlobo obuhle nabanye
Uyisebenzise ngobulumko imali
Ngokomzekelo, uYoshiko waseJapan wayesoloko ezibuza ukuba iBhayibhile ithetha ngantoni, waza wagqiba ekubeni akhe ayifunde. Kwenzeka ntoni emva kokuba eyifundile? Wathi: “IBhayibhile indincede ndafumana injongo yobomi nethemba ngekamva.” Wongezelela wathi: “Andisaziva ndingento yanto.” UAmit, ekuthethwe ngaye ekuqaleni, wagqiba ekubeni akhe ayifundisise iBhayibhile. Uthi: “Ndamangaliswa ngamacebiso enawo anokunceda wonke umntu.”
IBhayibhile iye yabutshintsha kakhulu ubomi babantu abaninzi. Nawe khawuyifunde uze ubone indlela enokukunceda ngayo.
Ukuze ufumane ulwazi olungakumbi ngendlela enokukunceda ngayo iBhayibhile, funda incwadana ethi Ninako Ukonwaba Entsatsheni, iphepha 12-14, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.